चर्चामा रहेको ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी के हो ? - Tech News Nepal Tech News Nepal
शनिबार, फाल्गुन ८, २०७७ १२:२६
चर्चामा रहेको ब्लकचेन र क्रिप्टोकरेन्सी के हो ?
‘नेपाल टेलिकमको भविष्यका लागि कमल थापासँग टक्कर लिएँ’
मेरो दुई वर्षे कार्यकाल पुरा भएपछि अर्को चार वर्षका लागि म्याद थप भइसकेको थियो ।
प्रविधि पछ्याउँदै ट्राफिक प्रहरी, यस्ता छन् अनलाइनबाटै सञ्चालित सेवा
काठमाडौं । पछिल्लो समय प्रविधि हाम्रो अपरिहार्य आवश्यकता बन्दै गएको छ । हरेक कुरा प्रविधिसँग
काठमाडौं । क्यानाडमा बस्ने भारतीय मूलका १६ वर्षीय तन्मय बक्शी आफूलाई एक सफ्टवेयर तथा कग्निटिभ
‘डेभलपरलाई पाठ पढाउन यसरी भायानेटको डेटा ह्याक गरेँ’
केही समयअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायानेटले नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो डेटा ब्रिचको घटना बेहोर्नुपर्‍यो ।